Wikipedia:Fototra dimy - Wikipedia
Ny wikipedia dia mandry sy miankina amin'ny fototra dimy.
Ny wikipedia dia raki-pahalalàna, azo atao alimanaka, raki-pahalalàna mikasika taranja manokana. Tsy amban'ny lisansa ny copyright © ny lahatsoratra voatahiry ato.
Tsy maintsy manaraka ny fitsipika momba ny lahatsoratra ny lahatsoratra hosoratana ato, tsy manana ny toerany ato ny asa noforonina.
Ny wikipedia dia tsy diksionera na toerana fanaovana propagandy na dokam-barotra na politika na gazety, sns. Jereo ny pejy Ny tsy tokony ho wikipedia ho an'ny antsipirihany.
Ny Fijerena tsy mitongilana.
Ny Fijerena tsy mitongilana dia ny fijerena manaraka ny fahamarinan'ny hevitra. Ny fahamarinana dia tsy miankina amin'ny finoana na fahalalan'ny tsirairay fa ny lalàna voajanahary na lalàna iraisana tsy hazo hiadian-kevitra.
Torolalàna momba ny Copyright.
Ny pejy rehetra eto amin'ny wikipedia dia amban'ny lisansa CC-By-SA 3.0 . Ny fanovana ny pejy dia malalaka ho an'ny rehetra. Izay pejy tsy mifanaraka amin'ny CC-By-SA dia tokony tsy aseho eto amin'ny wikipedia.
Io lisansa io dia manome alàlana mamorona, mandika, manova ary mizara ny votoatin'i Wikipedia. Ny fara hajaina fotsiny dia mitazona io lisansa io foana ho an'ilay lahatsoratra rehefa mandika, manova sy mizara. Mety zarazarain'iza na iza ny lahatsoratra napetraka tato amin'ny wikipedia, na dia hovidiana aza izy.
Ny lahatsoratra mitovy lisansa amin'ny wikipedia ihany koa dia azo hadika ato, fa tandremo, rarana ato amin'ny wikipedia ny lahatsoratra avy amina tranonkala hafa misy copyright (©). Ho voafafa avy hatrany ny takelaka tsy manaraka ny fitsipika momba ny copyright.
Ny mpikambana sy ny mpanova pejy dia tokony hifanaja. Ny hevitra no hiadiana raha tsy mety fa tsy ny mpikambana na ny mpanova. Aza mora entim-po.
Torolalana azo tsy raharahina
Tsy manana fitsipika hafa ny wikipedia afatsy ireo fitsipika nosoratana ireo.
Aza matahotra manoratra, manova sy mamafa pejy ianao. Ovay amin'ny tanjon'ny fanatsaràna ny lahatsoratra hitanao tsy feno. Tsy maninona raha tsy lavorary ny lahatsoratra eto raha manaraka ny fitsipika sy ny fepetra izy ireo.
Mba mahasahia manoratra. Aza miandry izany hoe fantatra daholo ny fitsipika vao manomboka. Raha misy diso ny ataonao eto, misy ho hitan'ny mpandray anjara izy ireo. Aza matahotra manelingelina ny fandehanan'ny wikipedia. Ny santionany teo aorian'ny santionanao dia mbola hita ary mbola azo averina. Azo averina daholo ny santionany rehetra. Aza manadino koa fa ho voatahiry ato mandrakizay ny lahatsoratra notehirizinao.
Fijerena tsy mitongilana
Ny tsy tokony ho wikipedia
GNU FDL/CC-BY-SA 3.0
Hita tao amin'ny "https://mg.bywiki.com/w/index.php?title=Wikipedia:Fototra_dimy&oldid=774838"
Voaova farany tamin'ny 8 Febroary 2016 amin'ny 05:02 ity pejy ity